Indlu Ethengiswayo EPimple Gurav, ePune
Real Estate Listings: » Residential homes » Apartments » IN » Maharashtra » Pune » Pimple Gurav » Indlu Ethengiswayo EPimple Gurav, ePune1
Usayizi waphansi: 896 Sq feet
Ifulethi le-2bhk lithengiswa emphakathini omuhle futhi onakekelwa kahle ukuze uthole imininingwane ethe xaxa lapho kusetshenziswa imali yomthengisi kusetshenziswa ama-2percent hhayi okuxoxisanayo. lena indawo enkulu futhi enhle yokukhaphethi.
I-Pimple Gurav iyidolobha lasePune, elisebangeni elingamakhilomitha ayi-10 ukusuka maphakathi nedolobha. IMumbai, inhloko-dolobha yaseMaharashtra, isebangeni elingamakhilomitha ayi-130. Izindawo eziseduzane nalesi sifunda yiNew Sangvi, Dapodi, Agrasen Nagar Society, Pimple Saudagar, Pimpri Sausagar, njll .UxhumanoIsiteshi sesitimela esiseduze nale ndawo yiDapodi, elele ebangeni eli-1 km. Ezinye iziteshi zikaloliwe ezingomakhelwane iKasar, Khidki nePimpri. Isitimela esikhulu sendawo, i-Pune Junction Railway Station, ngamakhilomitha ayi-10 ukusuka ePimple Gurav. Isikhumulo sezindiza i-Lohegaon si-11 kms ukusuka lapha. Le ndawo ibuye ixhumeke ngamabhasi ahamba phakathi kwamabhasi ahlukahlukene aleyo ndawo ahlanganisa iSai Chowk, iPimple Gurav, iSuvana Park, iSikole se-PMC esisha, iPavana Nagar, iShrushti Hotel, iKrishna Bazar, iRamkrishna Karyalaya, njll. IPimple Gurav iphezulu ngesidingo esifanele ngenxa yokusondela kwayo enkabeni yePune City. Njengamanje, kunemiphakathi yokuhlala engama-65 futhi amaphrojekthi amaningana asakhiwa. Ingqalasizinda yezenhlaloI-Gimpav Gurav inengqalasizinda yezenhlalo athuthukiswe ngokuphelele. Inezikole ezahlukahlukene kanye namakolishi kule ndawo efana neKashi Vishveshwar English Medium School, iMount Carmel High School, iMar Ivonis Convent School, iRainbow Pre Primary School, i-PCMC High School, iRising Sun, i-MS School, njll. Le ndawo inezibhedlela eziningi nemitholampilo. njengesibhedlela iParas, Siddhi Health Care Center, isibhedlela saseBora, iShree Samarth Hospital, iBhaichandra Hospital, njll. Amabhange afana ne-Yes Bank ne-ICICI Bank anamagatsha lapha.